I-Google Drayivu isungula uyilo olutsha ngokusekwe kuYilo lweeMathiriyeli | I-Androidsis
IDrayivu kaGoogle ihlaziywa ngoYilo loMxholo woMxholo
Umxholo weMathiriyeli uyaqhubeka nokufumana ubukho kwizicelo zikaGoogle. Ukuba kutshanje sibone uyilo olutsha lweGmail, ayingabo bonke abasebenzisi abathandaKukujika kwe-app entsha kule meko. Le yiGoogle Drayivu, esele ifumana uyilo olutsha ngokusekwe kule migaqo. Okwangoku, abasebenzisi be-iOS ngabokuqala ukuba babe noyilo, ngelixa izakwaziswa ngoMvulo kubasebenzisi be-Android.
I-Google Drayivu iguqula uyilo lwayo ngokubonakalayo. Ke sinonxibelelwano olutsha, utshintsho oluphawulekayo kwiimenyu kwi-app ngokwayo, kunye notshintsho kwiimpawu. Yonke loo nto ngomhlophe njengoyena mntu uphambili, Njengokwesiko kwizicelo zenkampani.
Iwebhu yayisele ifumene olu uyilo lutsha, kodwa usetyenziso lwalusalindile. Ngethamsanqa, ukulinda akukho kudala ngoku, kuba sele iqalile ukwaziswa ukusukela ngoMvulo ebusuku kwezinye iimarike. Ke abasebenzisi abane-app kaGoogle Drayivu kwi-smartphone yabo sele belungiselela uyilo olutsha. Ngelixa kwimeko ye-Android Kuya kufuneka ulinde de kube ngu-Matshi 18 ukuthunyelwa okufanayo.
Ukuhamba kwindawo kaGoogle Drayivu kutshintsha indawo. Ihamba iye ezantsi kwayo, apho ngoku sifumana iithebhu ezine zizonke. Kuzo sine: ikhaya, amanqaku aphezulu, ekwabelwana nam kunye nazo zonke iifayile. Ke sinokuhamba phakathi kwala macandelo ngendlela eza kuba lula kakhulu ngalo lonke ixesha. Ukongeza, kukwakho notshintsho kwibar yokukhangela, ebonakala ngoku ngawo onke amaxesha. Ngendlela efanayo neGoogle eye yazisa ngayo kwezinye ii -apps zayo, njengoMncedisi.
Kwakhona, ngoku xa singena kwi-app siza kubona amaxwebhu akutshanje. Ezo zithathwa njengezona zibaluleke kakhulu kuthi Iakhawunti yeGoogle Drayivu. Kwelinye icala, Imo yokutshintsha komsebenzisi ikwahlengahlengisiwe kwi-app. Ngoku, le nkqubo ilula noko. Kuba into ekufuneka uyenzile kukuchukumisa ifoto yeprofayile. Kuvula iwindow entsha, apho kuya kuthi kunikwe ithuba lokutshintsha uye kwelinye iakhawunti yomsebenzisi. Ke le nkqubo ilula kakhulu ngale ndlela, ukongeza kwiindleko zokuchitha ixesha elingaphantsi lokwenza.
Olunye utshintsho kuhlelo lokusebenza yinto ebizwa ngokuba yimenyu yesenzo. Imenyu enezenzo ngokubhekisele kwifayile. Ngoku, ihlelwe kwakhona ngendlela elula ngakumbi kubasebenzisi abakwi-Android kunye ne-iOS. Ukusukela kwezona zikhetho ziqhelekileyo, ezo zisetyenziswa rhoqo, zibekwa ngaphezulu. Ke kulula ukufikelela kuzo nangaliphi na ixesha. Ngaphandle kwamathandabuzo ukhetho olwenzelwe intuthuzelo enkulu kubasebenzisi. Yinto ekufuneka iqatshelwe ukuba usebenzisa iGoogle Drayivu rhoqo. Iya kuvumela ukwenza ezinye izinto ngokukhawuleza.
Njengoko sele sichazile ngasentla, Umhlophe ngoyena mntu uphambili kule yoyilo intsha kaGoogle Drayivu. Umbala olawula ngokupheleleyo ujongano lwesicelo. Kwelinye icala, sinokubona ukuba kukho utshintsho kwiimpawu, ukwamkela isitayile esifana nale sele sibonile kwezinye izicelo zikaGoogle ukuza kuthi ga ngoku, njengeGmail okanye uMncedisi. Yonke into inamathele ngakumbi kule ndlela.
Abasebenzisi be-Android kungekudala baya kuba nale uyilo lutsha-luyilo oluphefumlelweyo lwe-app. Kuqinisekisiwe ukuba ukusukela ngoMvulo, Matshi 18 iya kukhutshelwa i-Android ngokusemthethweni. Nangona kunokuthatha olunye usuku okanye ezimbini kuxhomekeke kwimarike. Kodwa kwiveki ezayo kuya kufuneka sele uyile uyilo olutsha lweGoogle Drayivu kwi-smartphone yakho ye-Android. Ucinga ntoni ngolu tshintsho lwenethiwekhi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » IDrayivu kaGoogle ihlaziywa ngoYilo loMxholo woMxholo
IHuawei ifuna ukumilisela iifowuni ezisongekileyo ezingaphantsi kwe-1.000 euro
IXiaomi ikuluhlu lwe-11 emhlabeni ngokuvelisa ezona zicelo zininzi zepatent